Timothy Samara: toro-hevitra 20 ho an'ny mpamorona tsy azonao odian-tsy hita | Famoronana an-tserasera
Timothy Samara: toro-hevitra 20 ho an'ny mpamorona tsy azonao adino
Misy pitsopitsony vitsivitsy izay tsy raharahaintsika matetika. Mety ho antsipiriany kely izy ireo fa raha raisintsika izy ireo dia afaka manangona fotoana be dia be ary afaka mampifantoka ny asantsika amin'ny vokatra tsara indrindra. Araka ny fantatrao, omaly dia nahita ny tolo-kevitra folo voalohany izahay Timoty samara (izay azonao idirana avy amin'ity rohy ity), ary anio dia hanohy ny tapany faharoa isika.
Malahelo ve ianao? Afaka manampy toro-hevitra vaovao amin'ity safidy ity ve ianao? Lazao ahy amin'ny hevitra iray fa aza saro-kenatra!
1 Tokony ho universal ianao; tsarovy: tsy ho anao ny asanao
2 Ampitao ary saraho
3 Hamarino tsara fa misy karazana sandan'ny tonal
4 Miasa am-pahatokisana: ataovy amin'ny fomba tsara na tsia
5 Refesina amin'ny masonao: ny endrika dia hita maso
6 Ataovy izay ilainao
7 Aza miraharaha ireo lamaody
8 Mandreraka ny comps static
9 Tantaran'ny fikarohana, fa aza averimberina
10 Mandosira amin'ny symmetry
Tokony ho universal ianao; tsarovy: tsy ho anao ny asanao
Mandritra ny asanao amin'ny maha-mpanakanto sary anao dia hianaranao zavatra maro, fa angamba ny iray amin'ireo zava-dehibe indrindra dia ny fahafahanao mampifanaraka ny filan'ny mpanjifanao. Tokony ho afaka hifanaraka amin'ny fironana, fangatahana ary tetik'asa samihafa ianao, saingy tsy midika izany fa tokony hanao tsy misy ny volanao ianao, ny mifanohitra amin'izay no izy. Ny tena fanamby dia ny fitazonana ny maha-ianao anao fa ny fahalalana ny fomba hifanarahana amin'ny mpanjifa, izay tadiavin'izy ireo ary ambonin'izay rehetra ilainy.
Ampitao ary saraho
Voaporofo fa mihombo kokoa ny fizotran'ny famakiana raha mianatra manafatra ny fampahalalana isika. Amin'ny ambaratonga sary, dia misy ifandraisany amin'ny fampiasana habaka fotsy sy ny fanajana ny faritra banga izay manampy ny fiforonantsika hiaina.
Hamarino tsara fa misy karazana sandan'ny tonal
Na dia tsy zavatra tokony homena foana aza izy io, satria miankina amin'ny karazana asa resahintsika, amin'ny tranga maro, dia zava-dehibe ny fananana halaliny lalina amin'ny ambaratonga maneho hevitra. Ny isan'ireo tonony ary koa ny tetezamita ary ny fomba fampifangaroana ny toe-javatra misy azy ireo sy ny fitambaran'izy ireo dia hamaritra ny valiny farany sy ny hery maneho hevitra.
Miasa am-pahatokisana: ataovy amin'ny fomba tsara na tsia
Zavatra tokony hazavainao tsara sy hosaintsaininao alohan'ny hidiranao hiasa. Mandritra ny fampandrosoana ny asanao dia maro ny vato misakana hiseho ary tsy maintsy manao fanitsiana sy famerenana amin'ny laoniny marobe ianao mandra-pahitanao ny valiny tadiavinao. Ity dia fotoana sy ezaka be dia be ka tokony hodinihinao tsara raha tianao izany ary raha mendrika izany. Misy ny tetikasa izay manana fiainana lava fohy kokoa noho ny hafa. Azo antoka fa mihoatra ny indray mandeha ny hevitra tonga ao an-tsainao izay tsara fa ny ampitso dia lasa hevitra tsy dia manara-penitra izy na farafaharatsiny tsy dia ampy loatra ka dia lasa manary azy ianao. Hamarino tsara fa ny asanao dia mihodina amin'ny zavatra tena mandrisika anao, raha tsy izany dia hiafara amin'ny fanaovana azy amin'ny fomba rehetra na avelanao ho tsy feno izany.
Refesina amin'ny masonao: ny endrika dia hita maso
Miezaha ho kendrena. Imbetsaka isika no miasa manaraka ny fitanisana ny hevitra saro-pantarina, zavatra izay amin'ny tranga maro dia tsy azo soloina am-pahatokiana ao anaty kisarisary. Zava-dehibe ny hianarantsika mandritra ny fizotran'ny asa hamakafaka izay ananantsika amin'ny ambaratonga kendrena, izay nataontsika fa tsy izay hitantsika ao an-tsaintsika amin'ny alàlan'ny zavatra nataontsika, izay tsy mitovy. Misy fotoana iray ilatsahantsika hevitra, amin'ny fitaomam-panahy, fa raha vao nahavita nanao asa ara-nofo mifototra amin'ireo hevitra ireo isika dia tsy maintsy mamakafaka tsara izay ananantsika eo anoloantsika. Ny fitsikerana tena ary indrindra indrindra, ny fandinihana marina dia hanampy antsika hahatsapa lesoka na hanamboatra fanovana sy fampiharana ny endrika ankehitriny aza.
Isaky ny azo atao dia tsy maintsy mianatra mamolavola singa farany amin'ny fananganana isika. Avy amin'ireo sary mivalona, ​​ny sarisary, ny famolavolana hevitra, ny famokarana aorian'ny famokarana ... Ity hevitra ity no irina, na izany aza marina fa maro ny fotoana rehefa miatrika tetikasa iray izay tsy maintsy atolotray amin'ny fe-potoana farany sy noho Ny olana ara-potoana dia tsy vitantsika ny mampivelatra ny singa rehetra ka mankanesa any amin'ny banky loharanon-karena na modely raisinay ho toy ny loharanom-pahalalana ary manampy anay hanangana toby iasana. Na izany aza, tolo-kevitra isika fa rehefa miasa amin'ny tetikasa izay antsika tanteraka isika, izany hoe tsy natao ho an'ny mpanjifa ivelany, dia mamolavola ireo fitaovana sy singa ilaina rehetra isika.
Aza miraharaha ireo lamaody
Tsarovy fa ny fironana dia mihelina ary miova rehefa mandeha ny fotoana. Ny fandraisana azy ireo ho toy ny loharanom-pahalalana ary ny fanarahana azy ireo tsy an-kanavaka dia mety hisy fiatraikany ratsy amin'ny asantsika satria amin'izany fomba izany dia esorintsika ny fahafaha-mamorona sy ny fivoaran'ny asa. Ny momba izany dia ny fialànanao amin'izay apetraka aminao avy any ivelany mba hitarika anao amin'ny faharesen-dahatrao sy ny fari-pitsipiky ny tenanao.
Mandreraka ny comps static
Misy ny fitsipi-pitambarana sy ny fandalinana maro izay hanome anao paikady hanampiana dinamika amin'ny fananganana anao. Mazava ho azy fa tsy maintsy tadidinao fa somary mifandraika izany satria miankina amin'ny foto-kevitra iasantsika dia mila dinamisme na statisma bebe kokoa isika, fa amin'ny ankapobeny, ny dynamism dia manana fahombiazana sy fahaiza-manao kanto kokoa.
Tantaran'ny fikarohana, fa aza averimberina
Raha mbola tsy nanana ny vintana ianao dia mivezivezy amin'ny tantaran'ny famolavolana sary. Ho gaga ianao mahita ireo mpilalao mahay namorona hevitra manaitaitra sy mahagaga, saingy tsy maintsy mianatra mitantana izany fahatsapana fiderana izany ianao ary mampita izany mankany amin'ny lalam-pivoaranao. Amin'ny alàlan'ny maka tahaka na manandrana maka tahaka ny feon'ny hafa, dia very ny maha-izy antsika ary noho izany dia very ny lanjan'izany ny asantsika. Araraoty ny fahafahanao manao an-tsoratra ny tenanao amin'ny famokarana mialoha, ny fahalalana sy ny fanovozan-kevitra bebe kokoa dia hanome anao tombony.
Mandosira amin'ny symmetry
Ny symmetry dia tsy mety satria enta-mavesatra ny votoatintsika ary noho izany dia misy ny tsy fahampian'ny otrikaina. Ho an'ity koa dia manome statisme, tsy fisian'ny lalao an-tsary, halaliny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Timothy Samara: toro-hevitra 20 ho an'ny mpamorona tsy azonao adino
Tsipika mazava, fomba tantara an-tsary izay nampalaza an'i Hergé tamin'i Tintin